Habaarkii Ubax Dahab | Martech Zone
Ma hubo inaan wax badan kaga hadlo filimada barta. Toddobaadkii la soo dhaafay aniga iyo wiilkayguba waxay u ahayd toddobaad filim ballaadhan waxaan ku biiray Blockbuster Online waana quruxsan tahay. Haddii aad i taqaanid, waxaad ogaan lahayd inay aad iigu adkaatay inaan ka joojiyo kirada ka socota Video-ga Qoyska ee deegaanka. Blockbuster waxaa ka maqan dumarka quruxda badan ee iga jaray khidmaddayda kala badh markasta oo aan booqdo oo aan isticmaalo majaajilkayga majaajillada ah. Waa tan sida booqashada caadiga ahi u socoto:
BVL: Mudane Karr, waxaad haysataa $ 14.00 oo ah khidmadaha soo daahay
Mudane Karr: Gabi ahaanba waad qurux badan tahay! Ma leedahay saaxiib?
BVL: (dhoola cadeyn) Uhhh… haa.
Mudane Karr: Hagaag, markaad aragto caawa, waxaad hubtaa inaad u sheegto inuu isagu yahay ka Ninka ugu nasiibka badan Dunida.
BVL: (dhoolacadeyn badan, dhabannada ayaa casaan ah)
Mudane Karr: Waan ka xumahay… waad qurxoontahay maan maqal waxaad tiri!
BVL: Oh… waxoogaa lacag ah ayaa lagaa raagay laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa ku saabsan, sidee ku bixisaa dhammaantood caawa oo kaliya waxaan kaa qaadayaa kalabar.
Mudane Karr: Wow… qurux badan oo deeqsi ah. Waxaad tahay cajiib. Mahadsanid !!!
Hada waxaadan arkin ama aadan maqal qeybtaan oo dhan waa caruurteyda. Wiilkaygu si dhakhso leh ayuu u dhaqaaqayaa isla markii aan ku garaacno miiska - wuu ogyahay waxa xiga ee dhacaya. Gabadhayda, dhanka kale, waxay jeceshahay inay halkaas joogto oo ay i weydiiso nacnac intaan shito. Ka dib markaan bixiyo, waxay jeceshahay inay u sheegto haweenka sida aan u sameeyo markasta oo aan soo galo, inta aan ahay, sida aan u rajo weynahay, ama si fudud inta aan cirro leeyahay. Ilaah iyada jecel!
Sikastaba! Waan duugaa. Haddii aad wax jacayl ah u hayso filimada epic, musiibooyinka Shakespearian, iyo / ama filimada fanka dagaalka, Habaarka Ubaxa Dahabka ahi waa seddexdooda Filimka waxaa lagu duubay goobta ugu weyn adduunka, wuxuu leeyahay midab dhalaalaya, jilitaan aan caadi aheyn iyo dhar aan la rumaysan karin. Waxaan helay filimkii oo bislaaday. Ijaar ama iibso maanta!
Hubso inaad daawato DVD-ga buuxa ee leh astaamaha dheeraadka ah. Aragtida ku saabsan sida filimka loo sameeyay loona jiheeyey iyo sidoo kale hawsha jilayaasha ee ay u sameeyeen filimkan waa mid xiiso leh.
NoIndex aad Feed on FeedBurner
Ninkayga iyo aniga waxaan ku biirnay barnaamijka "abaalmarinta ugu fiican" dhawaan. Talooyinka filimkeena toddobaadkan waxay noqon doonaan Guji iyo Eragon. Ku raaxeyso filimadaada boostada!
LOL… Malahayga taasi sifiican ugama shaqeyn doonto qofka celceliska counterbuster counter counter ah. Waxaan ku lahaa saaxiib dhab ahaantii sumad ku lahaa warbixintiisa amaahda Experian ee $ 498 ee khidmadaha soo daahay. Waxa laga yaabaa inuu u qalmay, laakiin waaw…
Haa, ragga ku jira Blockbusters malaha ma qadarin doonaan. $ 498?! Hoog! Waxay u egtahay inuu la baxay gaari oo uusan dib u soo laaban! Waxaan la yaabanahay haddii uu kireeyay nidaam ciyaar.